အတော်များများရှိပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာများ webinars နှင့်စာအုပ်များဘေးတွင်အခြားရွေးချယ်စရာနတ်ကတော်ကွပ်ထားတယ်.
သငျသညျဓလေ့ထုံးတမ်း software ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်သင်အမြဲနားထောင်နိုင်သည် ဆော့ဖ်ဝဲလျှို့ဝှက်ချက်များကို Podcast တခုကို စယ် Brunson မိတ်ဖက် '' Garret Pierson အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး, Scotty Brandley နှင့် Lindsay မိုးသီး.
အဆိုပါ Podcast တခုကိုဖွင့်မရရှိနိုင်ပါ iTunes ပေါ်, Google Play နဲ့ Stitcher သူတို့ထိုကဲ့သို့သော beta ကိုပစ်လွှတ် webinar ဖြစ်စေခြင်းငှါလမ်းအဖြစ် clickfunnels ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်ဗဟိုပြုမတူကွဲပြားသည့်အကြောင်းအရာများဆွေးနွေးရန်, အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲလ်လျှို့ဝှက်ချက်စာအုပ်ထဲတွင်ကမ်းလှမ်းမဟာဗျူဟာများအကြားသို့မဟုတ်သော့ချက်ကွဲပြားခြားနားမှု (စိတ်ကိုမြေပုံ, ထကျီစယ်နှင့် wireframing).
သူတို့ကအစတစ်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ Opt-In စာမျက်နှာစေရန်မည်သို့ထောက်ပြခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်စည်းကမ်းပမာဏကိုပူဇော်.
wizardry coding သငျ့မရှိခြင်းမခံပါနဲ့, သင်တစ်ဦးအစိုင်အခဲ software ကိုစိတ်ကူး STOP သင့်ထံမှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းသို့မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ဒီအခမဲ့သင်တန်းမှတ်ပုံတင်ရန်. (သငျသညျအခြားလူတိုင်းအတွက်ကဲ့သို့တူညီသောလှေထဲမှာနေ, သူတို့ကြောင့်ဦးခေါင်း-on ရဲ့အားလုံးဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်!)
အောက်မှာ Filed: Software များလျှို့ဝှက်ချက်များ အတူ Tagged: software secrets podcast
အဆိုပါလျှင်သင်ဖြစ်ကောင်းအံ့သြနေကြတယ် $27 အတွက်သုံးစွဲ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲလ်လျှို့ဝှက်ချက်စာအုပ် ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးရှိမယ့်.
ကောင်းစွာ, သငျသညျပိုက်ဆံဖြုန်းနဲ့တူမခံစားရဘူးလျှင်သင်တို့အဘို့ကောင်းသောသတင်းရှိပါတယ်, သငျသညျသွားရောက်လည်ပတ်က software ကိုလျှို့ဝှက်ချက်များကိုစာအုပ်ဒေါင်းလုပ်ရနိုင် စယ် Brunson ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်.
သူကရှင်းလင်းစွာဤသို့ဖော်ပြသည်အဖြစ်စာအုပ်၏အဓိကပူဇော်သက္ကာကိုသင်ကုဒ်ကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့တစ်ခုတည်းစိတ်ကူးရှိသည်သို့မဟုတ်ဘယ်မှာစတင်ကြဘူးလျှင်ပင် 90 ရက်ကြာအချိန်ဇယား၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် software ကို app များကိုဖန်တီးရောင်းဖို့လမ်းကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာအစအသစ်သော Customer များအတွက်ထပ်တလဲလဲဝင်ငွေနှင့်ရိပ်မိတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထွက်ကူညီရန်ဤနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်သင်မည်သို့သွန်သင်.
သငျသညျဖွငျ့ဤအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင် ဒီ link ကိုလာရောက်လည်ပတ်.
အောက်မှာ Filed: Software များလျှို့ဝှက်ချက်များ အတူ Tagged: ဆော့ဖျဝဲလျှို့ဝှက်ချက်များကိုစာအုပ် download,
တစ်ခုခုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်း ဆော့ဖျဝဲလျှို့ဝှက်ချက်များ – ဆော့ဖျဝဲလျှို့ဝှက်ချက်များကို ebook သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချကူညီဖို့သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာသင်၏အသက်တာနှင့်အတူလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာပိုက်ဆံအနိုင်ရသင်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာ၏အကြောင်းကြားထားနိုင်သည်ဖြစ်စေကြောင်းဖွင့်သေးငယ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်.
တစ်နည်းနည်းဖြင့်, ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့တစ် Win-Win အခြေအနေ.
အဆိုပါစာအုပ်ကို အသုံးပြု. ဆော့ဖျဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သုံးစွဲဖို့ခံရမည်နိုငျသော didactic ပစ္စည်းတွေအများကြီးဖို့နိဒါန်းကမ်းလှမ်းမှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ် အဆိုပါ Clickfunnels tools များ.
သငျသညျနိုင်တဲ့ coding နဲ့ web စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့စိတ်ကူးတစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်တောင်, သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူစိတ်ဝင်စားအတိုင်းဤထဲကငွေရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်.
အောက်မှာ Filed: Software များလျှို့ဝှက်ချက်များ အတူ Tagged: softwaresecrets - ဆော့ဖျဝဲလျှို့ဝှက်ချက်များကို ebook
ဆော့ဝဲလျှို့ဝှက်ချက်စာအုပ်လွယ်ကူစွာသာတစ်ခုတည်းညီမျှခြင်းအတွက်ပြသနိုင်မယ့်ဆက်စပ်မှုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: ဆော့ဖျဝဲလျှို့ဝှက်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ် – 500 ဆော့ဖျဝဲစိတ်ကူးများမီးစက်.
သင်သည်သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုရိုင်းကို run ပါစေရန်သင့်အားပင်အတိတ်ကာလထည့်သွင်းစဉ်းစားကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ tools များများစွာသုံးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
Wireframing mockup သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများသင်သည်သူတို့တီထွင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံဖော်ကူညီတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့စိတ်ကူးကပါလိမ့်မယ်’ နောက်ဆုံးတော့ကိုသင်ချင်သောလမ်း shaped, သငျသညျစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်ရန်.
အဆိုပါအခမဲ့ Register "ဒီ Next ကိုခုနှစ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ဆော့ဝဲ Build နှင့်စတင်ရန် 90 နေ့ရက်များ " လေ့ကျင့်ရေး
အောက်မှာ Filed: Software များလျှို့ဝှက်ချက်များ အတူ Tagged: ဆော့ဖျဝဲလျှို့ဝှက်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ် - 500 ဆော့ဖျဝဲစိတ်ကူးများမီးစက်
ဒါကတစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ Pun ကဲ့သို့မြည်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ, အဲဒါမဟုတ်ဘူး: တစ်ဦးက web-based အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသော-ရှာဖွေနေအိမ်မှာလိုအပ်ပါတယ်.
အဆိုပါကောင်းသောအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကြောင်း အိမ်ခြံမြေတင်းပလိတ်များ clickfunnels သူကဦးဆောင်မယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အဆိုပါအော်ပရေတာနှင့်ကိုက်ညီနိုင်မရရှိနိုင်ပါ.
အကယ်. အိမ်ခြံမြေအေးဂျင့် အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ရှာနေဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုသည်, အခမဲ့အကဲဖြတ်အမြဲဆောင်၏ပုံစံအိမ်သို့ဘေကွန်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်.
အိမ်ခြံမြေတန်ဖိုးအားတိုးမြှင့်အာရုံစိုက်တစ်ဦးကမဟာဗျူဟာအထင်မြင်မှားစေသောနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုအသုံးပြုမယ့်လျှင်, ရိုးရိုးသားသားအလေ့အကျင့်ကိုအောက်ပါ, ဒါကြောင့်အကြီးအနေရာများနှင့်အတူဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်သောဖောက်သည်အဘို့ကြီးသောရလဒ်များကိုပေးတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်.
အောက်မှာ Filed: Clickfunnels အတူ Tagged: အိမ်ခြံမြေတင်းပလိတ်များ clickfunnels